Fahasarotana aphasia sy famakiana azo: ny fanampian'ny teknolojia vaovao - Fiofanana kognitive
Ianao izao: Home » Articles » aphasia » Fahasarotana aphasia sy famakiana azo: ny fanampian'ny teknolojia vaovao
Ny fifandraisana dia fahaiza-manao lehibe ho an'ny zanak'olombelona, ​​ary mety haratra amin'ny ambaratonga marobe amin'ny olona miaraka aminy izany aphasia. Ny olona manana aphasia, raha ny marina, dia mety manana fahasahiranana amin'ny fitenenana, fanoratana, famakiana ary ny fahazoana karazan-teny rehetra. Ny fikarohana dia nifantoka indrindra tamin'ny famerenana amin'ny laoniny ny lahateny, ary tsy mahagaga raha omena ny maha-zava-dehibe an'io fahaiza-manao io amin'ny fiainana isan'andro. Somary natao ambanin-javatra kely kokoa anefa ny sehatry ny tsy fahazoana mamaky teny. Na eo aza izany Ny famakiana dia fahaiza-manao manan-danja eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy, ary mainka fa ireo izay, noho ny antony miasa na fialamboly, dia zatra namaky pejy maro isan'andro. Knollman-Porter, tamin'ny taona 2019, dia nanasongadina fa ny fahasarotana amin'ny famakiana dia mety hitarika fahasimbana eo amin'ny kalitaon'ny fiainana (fiheverana tena ho ambany, tsy fandraisana anjara ara-tsosialy, fahasosorana lehibe kokoa) na dia ireo mpamaky tsy mazoto aza.
Tsy tetikasa maromaro any Etazonia sy Eropa izay miankina amin'ny fikirakirana ny teny voajanahary (NLP), toy ny Tetikasa Simplext, izay mikendry ny hanamora ny fandefasana lahatsoratra ho an'ny olona manana aphasia, na ny VOALOHANY (natao ho an'ny olona manana autisme) izay manara-maso sy manolo ireo singa ao anaty lahatsoratra izay mety ho sakana amin'ny fahatakarana.
Famerenana nataon'i Cistola sy ireo mpiara-miasa aminy (2020)  dia nifantoka tamin'ny fitaovana nampiasaina taloha hanonerana ny fahasarotana amin'ny famakiana amin'ny olona manana aphasia amin'ny alàlan'ny fandinihana lahatsoratra 13 hita avy amin'ny tahiry samihafa. Niezaka ny hamaly ireto fanontaniana ireto ny mpikaroka:
Inona avy ireo fitaovana novolavolaina hanampiana ny olona aphasic amin'ny fahasarotana amin'ny famakiana
Inona avy ireo endri-javatra azo idirana amin'ireo fitaovana teknolojia be mpampiasa izay afaka manampy amin'ny famoahana ny lahatsoratra?
Raha ny momba ny fanontaniana voalohany, indrisy fa nahitana iray ny fandinihana tsy fahampian'ny fitaovana manokana. Amin'ny ankabeazan'ny tranga dia fitaovana maro no niarahana nampiasaina (toy ny synthesis kabary na fanasongadinana lahatsoratra). Ireo fitaovana ireo dia novolavolaina, tokony hohamafisina, tsy natao ho an'ny olona manana aphasia izy ireo, fa ho an'ny ankizy sy ny tanora dislexic. Ireto dia fitaovana mety mbola mahasoa amin'ny olona aphasic, saingy matetika tsy mamela ny famahana ny olana mifandraika amin'ny famakiana.
Noho izany dia ilaina ny mamorona fitaovana manokana ho an'ireo marary aphasic. Ny lafiny lehibe dia ny an'ny customization hihaonana amin'ny fahasarotana amin'ny fahitana sy ny fihetsehana.
Ireto misy antony lehibe:
Ny kalitaon'ny kabary fitenenana
Ny hafainganam-pandehan'ny kabary fitenenana
Ny fahaizana manova ny haben'ny lahatsoratra sy ny elanelana misy eo amin'ny teny
Ny fahaizana manova ho azy ireo teny na andianteny sarotra amin'ny endrika tsotra kokoa
Ho famaranana dia mbola lavitra ny lalana. Fitaovana matanjaka sy azo ovaina no ilaina. Na izany aza, izy io dia zavatra mety hampihena ny fahasosorana, ny fahatokisan-tena ambany ary ny fiankinan-doha amin'ny mpikarakara ny olona manana afasia.
 Knollman-Porter, K., Wallace, SE, Brown, JA, Hux, K., Hoagland, BL sy Ruff, DR, 2019, ny vokatry ny fomba an-tsoratra, ny feo ary ny fampiarahana ny fombafomba takatry ny olona manana aphasia. American Journal of Speech - Language Pathology, 28, 1206–1221.
 G. Cistola, M. Farrús, I. van der Meulen (2020). "Aphasia ary nahazo lesoka tamin'ny famakiana. Inona avy ireo fomba hafa azo soloina teknolojia avo lenta hanonerana ny tsy fahampiana famakiana? " Gazety iraisam-pirenena momba ny aretina ara-pitenenana sy fifandraisana.
aphasia, aphasia sy teknolojia vaovao, Famakiana
Fahasarotana aphasia sy famakiana azo: ny fanampian'ny teknolojia vaovao2020-12-172020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/ezgif-2-628b5dc636f7.png200px200px
Ny fitsaboana ny fahatakarana amin'ny aphasiaaphasia